November 14, 2012 – democracy for burma
Daw Aung San Suu Kyi speech on the Jawaharal Nehru.India-Video-english
On November 14, 2012 November 15, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
WIKI LEAKS: ARAKAN ROHINGYA NATIONAL ORGANIZATION CONTACTS WITH AL QAEDA AND WITH BURMESE INSURGENT GROUPS ON THE THAI BORDER
On November 14, 2012 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
cartoon of the day – Obama is bringing his own water to Thailand . Stephff Tribal Art
Burma-Myanmar-President Obama-President U Thein Sein meeting
On November 14, 2012 November 14, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာမီဒီယာသမားများ၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများစောင့်ထိန်းရန်လို (ထပ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်း Share ပေးရန်)
မြန်မာနိုင်ငံသို့ သမိုင်းဝင် အလည်အပတ်ခရီးရောက်ရှိလာမည့်အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာမီဒီယာများ၏ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပိုင်းစောင့်ထိန်းရန်လိုအပ်ကြောင်း လေ့လာသူများက ထောက်ပပြလိုက်သည်။ အစိုးရသစ်နောက်ပိုင်း မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်များပေးလာတာနှင့်အတူ မီဒီယာသမား
များ၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန် သတင်းရလိုမှုများကြောင့် ကာယကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲ့အစည
်းများနှင့် မသင့်တင့်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရဖူးသည်။ သို့သော် ယခုခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သမိုင်းဝင်ဖြစ်မည့်အပြင် မြန်မာလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို ပြသနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်နေသောကြောင့် မိမိတို့၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် အတ္တစိတ်ကြောင့် သူတစ်ပါးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အပြုအမူမျိုးမပြုလုပ်မိကြစေရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီကျင့်သားရသော စည်းကမ်းရှိသည့် မီဒီယာသမားများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသကြရန် PDK မှ တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ပါသည်။News By: People Development for Knowledgeအေးချမ်းမွန်မှ Royal Hero Media တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၏ သမိုင်းဝင်မြန်မာခရီးစဉ်တွင် အာရှ၏ နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်(ထပ်မံလက်ဆင့်ကမ်း Share ပေးပါရန်)
မြန်မာနိုင်ငံသို့ သမိုင်းဝင် အလည်အပတ်ခရီးလာရောက်ရန်ရှိသော အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမား၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားမည့် အစီအစဉ်ပါဝင်မည်ဖြစ်ရာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည့် နေရာကို သမိုင်းဝင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမဆောင်အားရွေးချယ်ထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ကန့်သတ်ထားသော ဧည့်သည်အရေအတွက်သာ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းကို ပြုပြင်မွန်းမံမှုများပြုလုပ်နေပြီး လုံခြုံရေးများချထားကြောင်း PDK မှ သတင်းရရှိသည်။
Ko Nay Myo Zin solve with Police peacefully .-video
The dispute was finally settled inavery amicable manner with Police by .
သုံးရက်အတွင်း ကြည့် ရှုသူ 4035 ယောက် ရှိသွားတဲ့ လျှပ်တပြတ် မြင်ကွင်း တခု ကျနော်နဲ့ ပန်းတနော် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့ တွေ့ဆုံ စကားပြောဖြစ်တဲ့ ပုံလေးပါ။ မြို့နယ်မှူးနဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ငါးဆယ် ခန့်တို့က ပန်းတနော်မြို့နယ် ထဲက ခနွဲကဘို ဆိုတဲ့ ကျေးရွာလေးမှာ ရှိတဲ့ အင်းသူကြီး တဦးရဲ့ ငါးဖမ်း အင်း ခြံဝင်းထဲမှာ တပ်စွဲပြီး လုံခြုံရေးယူထားတယ်။ ကျေးရွာလူထု ကိုကျတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက အတင်း အနိုင်ကျင့်ပြီး လက်မှတ်တွေ ခေါ်ထိုးခိုင်းနေတယ်။ အဲဒီ အင်းကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကျေးရွာလူထုက ကြိုးစားနေပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒါမှ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကာအကွယ်အဖြစ် ခေါ်ပြီး ခိုင်းထားတာ သက်သေခိုင်မာအောင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ဇာတ်လမ်းထွင်နေချိန် ကျနော်တို့ အဖွဲ့က အဲဒီရွာကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။
ပြည်သူလူထု နစ်နာထိခိုက်နေတယ် ဆိုရင် အချိန် နေရာမရွေး ကာကွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ အသင့်ရှိတဲ့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဟာ အခုလိုပဲ ရဲ တပ်ဖွဲ့မှူးကို သိလိုသမျှ ပွင့်လင်းစွာ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
2012 Landmine & Cluster Munition Monitor Country Report Myanmar/Burma released
Landmine Monitor has identified over 3,242 landmine casualties in Myanmar from 1999 through the end of 2011.
When compared to other countries, Myanmar has produced the third highest number of known casualties due to antipersonnel landmines, globally, over the past six years.
Despite this high level of casualties, mine risk education remains inadequate or non-existent in most areas with reported casualties. Medical and rehabilitative assistance to mine survivors and persons with disabilities in Myanmar remains marginal.
In December 2011, Myanmar joined the international Convention on the Rights of Disabled Persons, which obligates the government to see to the needs of mine and other disabled people.
At least 47 townships in Chin, Kachin, Kayin (Karen), Kayah (Karenni), Mon, Rakhine, and Shan states, as well as in Bago (Pegu) and Tanintharyi (Tenasserim) divisions suffer from some degree of mine contamination, primarily from antipersonnel mines. Kayin state and eastern Bago division contain the most heavily mine-affected areas. Currently no humanitarian mine clearance programs exist within the country.
read all including links http://burmamineban.demilitarization.net/?p=439
Naw Kham Godfather of Golden Triangle sentenced to death-engl-video
Talk Show: Accountability & Transparency Part (1): Golden Moon TV (Burmese Program)video
Blinkhackergroup: ready to face what you asking for? stupid enough to attack all buddhist societies..burmese/english
သူတစ်ယောက်တည်းထိမ်းချုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့အကောင့်တွေက https://www.facebook.com/ArkarHeinisthegod ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အစစ်အမှန်အကောင့်က https://www.facebook.com/htetsoeaung123/ ဖြစ်တယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အာကာဟိန်းဟာအဲဒီအကောင့်ကိုလည်းသုံးနေလို့ဖြစ်တယ် ။
BHG ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ဆိုတာ သူ့အတွက် မိုက်မဲမှုတစ်ခုပါပဲ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းကို တိုက်ခိုက်ခြင်း မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုးရွားတဲ့စကားလုံးတွေ ပုံတွေနဲ့တကွ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း ဟာ သူ့ရဲ့မိုက်မဲမှုတစ်ခုပဲ ။ ဘာကြောင့် ဒီလောက် ပြင်းထန်တာလဲ ။
လုံလောက်တာထက်ကိုလုံလောက်ပါပြီ ။ အခုသူ့ပါးစပ်ပိတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ သူဟာ အမြဲ ပဲ နောက်ကွယ်မှာပဲရှိနေရမယ် ။ ဒီကောင့်ကို လူမှုကွန်ယက်ဆိုက်ထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့သမျှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအခန်းထဲထည့်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ မြန်မာအစိုးရ ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလိုအပ်သမျှ အချက်အလက်တွေနဲ့ ဒေတာတွေကို အားလုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ် ။
ဟက်ကင်လုပ်တယ်ဆိုတာ အကောင့်တစ်ခုကို ဟက်ယုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး BHG သည် ဒီလိုဆိုးရွားရူးသွပ်တဲ့အကောင့်မျိုးအလိုမရှိပါဘူး ကျွန်တော်တို့ သူ့ရဲ့ အကောင့်စစ်ကို ဟက်ပြီး သူ့ရဲ့ ဘ၀အစစ်အမှန်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါပြီ ။ ကဲ အခုတော့ မင်း အချုပ်အနှောင်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ မျက်နှာပြဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလား ဒါမှမဟုတ် ဘ၀အစစ်အမှန်မှာ မင်းလုပ်ခဲ့သမျှ အတွက်မင်းထွက်ပြေးဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလား ။
ငါတို့ နေရာတိုင်းမှာရှိတယ် ။
မူရင်း – http://www.blinkhackergroup.org/2012/10/ready-to-face-what-you-were-asking-for.html
Tango down… This is social network, Don’t abuse others! Or we will bust you!This is Akar Hein (aka) Htet Aung Soe, he is the one who controlled this account! https://www.facebook.com/ArkarHeinisthegod.His real ID is https://www.facebook.com/htetsoeaung123/, because Akar Hein controls this account too.
He is stupid enough to call out for challenges to BHG. He was stupid enough to attack all buddhist societies as well as attacking/abusing at myanmar girls with vulgar words by stealing girl profile pictures. Why so serious…
Enough is enough. It is time for you to shut up, you should be at behind bars. So we demand Myanmar Government to take this kid into investigation room for whatever he had done on social network. We can provide all his data & information whatsoever Government needs.
Hacking is not about hacking just an account, and BHG doesn’t need to your stupid account, we hacked your real account and to reveal your personal life to show your real Identity. Now be ready face your life at behind bar, or try to run for your life in real life for what you have done!
Shared by thettantcho